Ch 10 maka – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaMako / Ch 10 maka
10:1 Uye asimuka, akabva ipapo kunyika yeJudhea mhiri kwaJoridhani. uye zvakare, Chaunga vakaungana pamberi pake. Uye sezvo akanga vakajaira kuita, zvakare akavadzidzisa.
10:2 uye kusvika, VaFarisi ndokumubvunza, vachimuidza: "Zviri pamutemo here kuti murume anoramba mudzimai wake?"
10:3 Asi achipindura, akati kwavari, "Chii Mozisi achikurayiridza?"
10:4 Vakati, "Mozisi akapa mvumo kunyora rugwaro rwokumuramba uye kuchipedza naye."
10:5 Asi Jesu akapindura achiti: "Zvakanga zvakafanira kwekuoma kwemoyo wako kuti akanyora kuti murayiro kwauri.
10:6 Asi kubva pakutanga kusikwa, Mwari akavaita munhurume nomunhukadzi.
10:7 Nokuda kwaizvozvi, murume achasiya shure baba vake naamai, uye anofanira kunamatira wake.
10:8 Uye ava vaviri vachava imwe nyama. uye saka, zvino vava, kwete mbiri, asi nyama imwe.
10:9 saka, izvo zvabatanidzwa naMwari, munhu ngaarege kuzviparadzanisa. "
10:10 uye zvakare, mumba, vadzidzi vake vakamubvunza pamusoro zvimwechete.
10:11 Akati kwavari: "Ani naani anoramba mukadzi wake, uye akaroorwa, anoita upombwe naye.
10:12 Uye kana mukadzi anodzinga murume, uye akaroorwa nomumwe, iye anoita upombwe. "
10:13 Vakauyisa kwaari vana vaduku, saka kuti avanyangate. Asi vadzidzi akakurudzira vaya akavabudisa.
10:14 Asi Jesu wakati achiona izvi, Akatora mhosva, uye akati kwavari: "Tenderai nepwere kuuya kwandiri, uye regai rambidza navo. Nokuti akadai izvi Umambo hwaMwari.
10:15 Amen ndinoti kwamuri, Ani naani asina kugamuchira umambo hwaMwari somwana muduku, havazogari mahuri. "
10:16 Uye akavafungatira, uye achiisa maoko ake pamusoro pavo, akavaropafadza.
10:17 Zvino wakati abva munzira, umwe, ndokumhanyirako uye akapfugama pamberi pake, akamubvunza, "Mudzidzisi Akanaka, chii chandingakuitira, I kuitira kuti chengetedzo husingaperi?"
10:18 Asi Jesu akati kwaari, "Munondishevedzerei zvakanaka? Hakuna akanaka kunze kwaMwari chete.
10:19 Munoziva mirairo: "Usaita upombwe. Musauraya. Usaba. Musataura uchapupu hwenhema. Musazvinyengera. Kudza baba vako namai vako. '
10:20 Asi achipindura, akati kwaari, "Mudzidzisi, Ava vose ndakazvichengeta kubva pauduku hwangu. "
10:21 Zvino Jesu, akanyatsomutarira naye, vaimuda, uye akati kwaari: "Chimwe chinhu chinoshaikwa kwamuri. famba, tengesa zvose zvaunazvo, upe varombo, uye ipapo uchava nefuma kudenga. ugouya, nditevere."
10:22 Asi iye akaenda kuchemawo, wavakanga vakasuruvariswa kwazvo neshoko. Nekuti rakange rine nhumbi zhinji.
10:23 Jesu, ringa, akati kuvadzidzi vake, "Zvakaoma sei vane fuma kupinda muushe hwaMwari!"
10:24 Vadzidzi vakashamisika nemashoko ake. asi Jesu, Answer zvakare, akati kwavari: "Vanakomana Little, kuoma kwazvakaita kuti vanovimba mari vapinde muumambo hwaMwari!
10:25 Zviri nyore kuti ngamera apfuure ziso rimwe tsono, pane kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari. "
10:26 Uye vakashamiswa zvakatowanda, uye vakati pakati pavo, "Ndiani, ndokubva, angaponeswa?"
10:27 Jesu, akanyatsomutarira navo, akati: "Kuvanhu hazvibviri; asi kwete naMwari. Nokuti Mwari zvinhu zvose zvinobvira. "
10:28 Petro akatanga kuti kwaari, "Tarirai, isu takasiya zvose tikakuteverai. "
10:29 Achipindura, Jesu akati: "Amen ndinoti kwamuri, Hakuna munhu wakasiya imba shure, kana hama, kana hanzvadzi, kana baba, kana mai, kana vana, kana nyika, nokuda kwangu uye nokuda kwevhangeri,
10:30 usingazogamuchiri kane zana kupfuura, ikozvino nenguva ino: dzimba, uye nehama, nehanzvadzi, navanaamai, uye vana, nyika uye, nokutambudzwa, uye mune ramangwana zera husingaperi.
10:31 Asi vazhinji vekutanga vachava vekupedzisira, uye vokupedzisira vachava vokutanga. "
10:32 Zvino vakanga vari munzira vachikwira kuJerusarema. Zvino Jesu akaenda mberi kwavo, Vakashamisika. Uye vaya vakanga vachimutevera vakatya. uye zvakare, achitora parutivi vane gumi navaviri, akatanga kuvaudza zvakanga zvoda kuitika kwaari.
10:33 "Nokuti tarirai, tinokwira kuJerusarema, uye Mwanakomana womunhu achaiswa kune vakuru vavapristi, uye kuti vanyori, uye vakuru. Uye vachamutongera rufu, uye ivo vachava vangamugamuchidza avahedheni.
10:34 Uye ivo vachava kumuseka, uye mate, uye vachamurova, uye vamuuraye. Uye pazuva retatu, uchamukazve ".
10:35 Zvino Jakobho naJohwani, vanakomana vaZebhedhi, vakaswedera kwaari, vachiti, "Mudzidzisi, tinoda kuti chero chatichakumbira, ungaita kwatiri. "
10:36 Asi iye akati kwavari, "Munoda kuti ndiite kuti iwe?"
10:37 Vakati, "Mubvumire kwatiri kuti tigare, umwe kuruoko rwenyu rworudyi uye mumwe kuruboshwe rwenyu, mu "kubwinya kwenyu.
10:38 Asi Jesu akati kwavari: "Hamuzivi zvamuri kukumbira. Mungagona kunwa kubva ndezvevaya vakazvigadzirirwa naBaba yandakaita kunwa, kana kubhabhatidzwa norubhabhatidzo zvandiri kubhabhatidzwa?"
10:39 Asi vakati kwaari, "Tinogona." Jesu akati kwavari: "Zvechokwadi, unofanira kunwa kubva ndezvevaya vakazvigadzirirwa naBaba, izvo ndinonwa; uye imi muchabhabhatidzwa norubhabhatidzo, nako ndiri kubhabhatidzwa.
10:40 Asi kugara kuruoko rwangu rwerudyi, kana pane wangu kuruboshwe, hazvisi zvangu kuti ndikupei, asi zviri avo vanoirima wakagadzirirwa. "
10:41 Uye gumi, pamusoro vachinzwa izvi, vakatanga kutsamwira kuna Jakobho naJohani.
10:42 asi Jesu, pokuvashevedza, akati kwavari: "Munoziva kuti avo vanoita sevasina vatungamiri pakati pavaHedheni vanatenzi vavo, uye vatungamiri vavo vanoshandisa simba pamusoro pavo.
10:43 Asi hazvisi kuva saizvozvo pakati penyu. pachinzvimbo, ani aizova mukuru anofanira mushandiri wenyu;
10:44 uye ani nani wokutanga pakati penyu anofanira kuva muranda zvose.
10:45 saka, wo, Mwanakomana wemunhu haana kuuya kuti achizondishumira kwaari, asi kuitira kuti aizopa upenyu hwake ruve rudzikunuro rwevazhinji iye achizondishumira uye. "
10:46 Vakaenda kuna Jeriko. Uye sezvo akanga atanga kubva Jeriko nevadzidzi vake uye vakawanda kwazvo vazhinji, Bhatimio, mwanakomana waTimio, murume bofu, ndikagara achikumbira parutivi rwenzira.
10:47 Zvino wakati anzwa kuti ndiJesu weNazareta, akatanga kudanidzira uye kutaura, "Jesu, Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. "
10:48 Uye vazhinji vanokurudzirwa kuti anyarare. Asi iye wakanyanya kudanidzira kwazvo, "Mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. "
10:49 Jesu, amire achiri, amurayiridza kunzi. Zvino vakadana bofu, achiti kwaari: "Ivai norugare. simuka. Anokudana. "
10:50 Uye achidzinga parutivi nguo yake, iye leapt, akaenda kwaari.
10:51 Uye achipindura, Jesu akati kwaari, "Unodei, kuti ndirege kuita kuti iwe?"Murume uya bofu akati kwaari, "Tenzi, kuti ndione. "
10:52 Ipapo Jesu akati kwaari, "Enda, rutendo rwako rwakuponesa iwe wose. "Pakarepo akaona, uye iye akatevera Jesu munzira.